Koox hubeysan oo caawa degmada X/jajab ku dishay nin kitaab ku dhex aqrisanaayay masjid – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Koox hubeysan oo caawa degmada X/jajab ku dishay nin kitaab ku dhex aqrisanaayay masjid
Koox hubeysan ayaa caawa gudaha masjidka Bandhaboow oo ku yaala degmada X/jajab ee magaalada Muqdisho ku dishay nin la sheegay inuu hore uga tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in koox ku hubeysan bistoolado ay salaadii cishaha kadib gudaha usoo galeen masjidka Bandhaboow, kadibna ay rasaas madaxa kala dhaceen marxuumka.
Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cumar ayaa sidoo kale ka mid ahaa xerta ku xirneyd masjidka Bandhaboow islamarkaana la shaqeyn jiray imaamka masjidkaasi, waxaana xilliga la dilaayay la sheegay inuu aqrisanaayay kitaab.
Kooxaha dilka u geystay ninkaasi ayaa la sheegayaa in dilka kadib ay goobta isaga baxsadeen.
Ciidamo katirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee dowladda Soomaaliya oo dilka kadib soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa halkaasi ka bilaabay baaritaano ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen.
Ma jirto cid baaritaankaasi lagu soo qab-qabtay, waxaana xilliga ay baaritaanada sameeynayeen ciidanka ay ku amreen dadkii masjidka joogay inay joogaan illaa uu baaritaanka ka dhamaanayo.
Dilkaan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo isbuuc gudaheed ah uu ka dhaco degmada X/jajab ee magaalada Muqdisho, iyadoona dhawaantaan guri ku yaala xaafadda Buur-karoole lagu dilay nin nabadoon ah oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cumar Ibraahim.